Maxkamad ku taala dalka Airland oo xukun adag ku ridday aabe iyo hooyo guday gabadhooda – Maanta Online
Maxkamad ku taala dalka Airland oo xukun adag ku ridday aabe iyo hooyo guday gabadhooda
Warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa qabsatay falanqeynta qoys Soomaali ah oo maxkamad Airland ku taala ku ridday xukun adag, kaddib markii la ogaaday inay gudeen gabadhooda oo da’deedu gaareysi 20-sano jir.
Dhacdada qabsatay lamaanayaasha Soomaalida ah ayaa la ogaaday kaddib markii gabar ay dhaleen iyadoo aan xafaayad wadan ku dhacday dhulka, goob uu ka shaqeynayay aabaheed oo xilligaasi ay booqasho ugu timid.
Gabadha oo loola cararay isbitaalka kaddib markii dhiig fara badan uu ka yimid farjigeeda, ayaa dhaqaatiirta isbitaal ku yaala Airland waxay sheegeen in gabadhaasi Soomaaliyeed ay qabto dhaawacyo loo geystay xubinteeda taranka.
Saxaafadda Ingiriiska oo si weyn uga hadlay dhacdadaasi ayaa sababtay in ciidamada dowladda Airland ay u yeeraan aabaha iyo hooyada dhashay gabadhaasi, waxaana kiiska dacwadda loo heysto la wareegtay maxkamadda arrimaha qoyska qaabilsan.
Waalidiinta gabadha ayaa beeniyay in gabadhooda ay gudeen, isla markaana dhaawaca uu ka soo gaaray markii ay kuftay iyadoo xawaare sare ku socota, hase yeeshee dacwad oogayaasha maxkamadda Airland ayaa soo bandhigay caddeymaha ka soo baxay baaritaanka dhaqaatiirta caafimaadka.
Maxkamadda Airland ayaa ku xukuntay aabaha iyo hooyada Soomaaliga ah 10-sano oo xarig ah, xukunkaas ayaa la qafiifiyay bacdamaa ay yihiin waalidiinta dhalay gabadha, iyadoo sharciga dalkaasi uu dhigayo in lagu xukumo 14-sano oo xarig ah dembiilayaasha falalka noocaan ah u geysta gabdhaha da’da yar iyo haweenka.
XIGASHO: Wakaaladaha wararka
← RW KHEYRE: “Argagixisada weerarka ay ku soo qaaday dhismaha wadada muhiimka ah kuma guuleysan”
MUQDISHO: Xarun muhiim u ah dadka qaba AIDS-ka oo albaabada loo laabay (Waa maxay sababta?) →
Ganacsato lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen gargaarka dadkii dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda Baladweyne
Fannaanka Dayax Dalnuurshe oo ammaan kala dul dhacay degaanno ka tirsan Galmudug (Daawo)